Ny iPhone dia manohy mangataka ny tenimiafiko Apple ID! Ity ny The Real Fix. - Iphone
vorona mena dia mariky ny inona
maninona ny iphone 6 no tsy handoa vola
ny iphone tsy andefasako sary
ny findaiko dia miverina mamerina hatrany
iphone niraikitra tamin'ny sary famantarana apple iphone 8
Ny iPhone dia manohy mangataka ny tenimiafiko Apple ID! Ity ny The Real Fix.
Ny iPhone-nao dia mitaona anao hiditra hatrany amin'ny Apple ID anao ary tsy azonao antoka ny antony. Na impiry na impiry ianao no manoratra azy dia mbola mangataka ny Apple ID anao ny iPhone. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao inona no hatao rehefa mangataka ny tenimiafinao Apple ID hatrany ny iPhone-nao !
Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhoneo no zavatra voalohany andrana raha mbola mangataka ny tenimiafinao Apple ID izy. Ny iPhone-nao mety miaina glitch lozisialy kely fotsiny!
Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ny solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho raha manana iPhone 8 na maodely iPhone ianao. Raha manana iPhone X na vaovao ianao dia tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra eo anilany sy ny bokotra volume mandra-paha solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho.
Na izany na tsy izany, ario ny sary masina mena avy any ankavia miankavanana hanidy ny iPhone. Andraso vetivety, avy eo dia tsindrio ary tazomy indray ny bokotra herinaratra na ny bokotra sisiny mandra-pisehon'ny sary famantarana Apple eo afovoan'ny efijery mba hamerenanao ny iPhone indray.
Hamarino tsara fa havaozina daholo ny rindanao rehetra
Indraindray rehefa tsy misintona na manavao ny rindranasa iray dia mety mijanona ao anaty tadiny tsy misy farany ny fangatahana ny tenimiafinao Apple ID. Ny iPhone-nao dia mangataka foana ny ID-nao Apple rehefa mametraka fampiharana vaovao ianao. Ny iPhone-nao koa dia hanentana anao hiditra ny tenimiafinao Apple ID isaky ny manavao fampiharana ianao arakaraka ny fanao Fikirana amin'ny ora amin'ny efijery namboarina.
Voalohany, sokafy App Store ary paompy ny vaovao farany kiheba eo ambanin'ny fampirantiana. Avy eo, tap Vaovao farany rehetra amin'ny lafiny ankavanan'ny efijery. Hanavao ny fampiharana anao rehetra amin'ny fanavaozana vaovao misy izany.
telefaona hoy ny famandrihany nefa tsy mandeha izy
Manaraka, mandehana any amin'ny efijery iPhone Home anao ary tadiavo ireo fampiharana milaza hoe 'Miandry…'. Ireo dia fampiharana miandry ny hametrahana azy na havaozina, izay mety hiteraka iPhone tsy mangataka ny Apple ID anao.
Raha misy rindranasa milaza hoe 'Miandry…', kitiho fotsiny ny kisary mba hanombohana ny fizotry ny fametrahana na fanavaozana. Zahao ny lahatsoratray hafa raha te hahalala bebe kokoa momba izany inona no hatao amin'ireo fampiharana mihitsoka miandry .
Mety mbola mangataka ny tenimiafinao Apple ID ny iPhone satria mihazakazaka kinova iOS efa taloha izy io. Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Fanavaozana ny lozisialy ary zahao raha misy fanavaozana iOS misy. paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana iOS hita amin'ny iPhone-nao!
Midira sy mivoaka amin'ny ID Apple
Ny fidirana sy ny fivoahan'ny Apple ID dia toy ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone-nao, fa ho an'ny Apple ID-nao. Ny fivoahana sy ny fiverenanao dia mety manamboatra glitch izay mahatonga ny iPhone mangataka hatrany ny tenimiafinao Apple ID.
Sokafy ny fikirana ary kitiho ny anaranao eo an-tampon'ny efijery. Mikorisa rehetra hatrany amin'ity menio ity ary paompy Hivoaka . Raha mitady ny iPhone-ko dia tsy maintsy ampidirinao ny tenimiafinao Apple ID mba hamonoana azy.
Vantany vao tafavoaka ianao dia azonao atao ny mikitika ny Sign In amin'ity menio ity ihany mba hidirana ao amin'ny Apple ID anao.
Atsaharo ny FaceTime & iMessage ary avereno
FaceTime sy iMessage dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra mifandray mivantana amin'ny Apple ID anao. Rehefa manana olana amin'ny Apple ID ianao dia mety hamaha ny olana ny famonoana ny FaceTime sy iMessage.
Voalohany, andao vonointsika ny FaceTime. Misokatra Fikirana ary tap FaceTime . Avy eo, kitiho ny switch eo akaikin'ny FaceTime eo an-tampon'ny menio mba hamonoana azy. Miandrasa segondra vitsivitsy, avy eo paompy indray ny switch mba hiverenan'ny FaceTime indray. Mety mila miverina miditra ny tenimiafinao Apple ID sy Apple ID ianao rehefa averinao ny FaceTime.
Manaraka, vonoy ny iMessage amin'ny fanokafana Fikirana ary mitendry Hafatra . Avy eo, kitiho ny switch eo akaikin'ny iMessage eo an-tampon'ny efijery mba hamonoana azy. Kitiho indray ny switch mba hamerenanao ny iMessage. Azonao atao ny mangataka ny hiditra indray ny Apple ID sy ny tenimiafinao Apple ID rehefa averinao indray ny iMessage.
Zahao ny toeran'ny Apple Server
Indraindray ianao dia hahatsapa olan'ny Apple ID amin'ny iPhone anao rehefa tapaka ny Apple Servers. Apple dia mety manao fikojakojana mahazatra, na mety miaina fifamoivoizana mavesatra ny mpizara azy ireo.
inona no dikan'ilay hazon'aina ao anaty Baiboly
Zahao hoe Pejy Apple's Status Status ary alao antoka fa misy teboka maitso eo akaikin'ny Apple ID. Raha tsy maitso ny teboka eo akaikin'ny Apple ID dia tsy ianao irery no miaina olana amin'ny Apple ID anao!
Rehefa maty ny mpizara dia zavatra iray ihany no azonao atao - mahareta! Hitsangana indray izy ireo amin'ny fotoana fohy.
Avereno ny tenimiafinao Apple ID
Ny fanovana ny tenimiafinao Apple ID indraindray dia mety hahatonga anao handalo ny tsingerin'ny iPhone tsy manam-petra izay mangataka ny tenimiafinao Apple ID. Raha hamerina ny tenimiafinao Apple ID dia sokafy Fikirana ary tsindrio ny anaranao eo an-tampon'ny efijery. Manaraka, tap Password & Security -> Hanova tenimiafina . Hasaina hiditra ao amin'ny kaody passcode iPhone-nao ianao ary mamorona teny miafina ID Apple vaovao.
Ny famerenana ny firmware firmware (DFU) no karazana famerenana amin'ny laoniny lalina azonao atao amin'ny iPhone-nao. Ny famerenana amin'ny laoniny dia mamafa sy mamerina ny tsipika kaody rehetra amin'ny iPhoneo, izay ahafahantsika manafoana ny mety hisian'ny olana amin'ny lozisialy.
Raha mangataka ny tenimiafinao Apple ID hatrany ny iPhone rehefa vitanao ny famerenana amin'ny laoniny DFU dia mety hisy olana amin'ny kaonty Apple ID anao izay ny mpiasa Apple irery no afaka manamboatra azy.
Izaho dia mandrisika mamorona backup iPhone alohan'ny hametrahana ny iPhone amin'ny maody DFU. Raha vantany vao manana backup ianao dia zahao ny lahatsoratray hafa raha hianatra apetraho amin'ny maody DFU ny iPhone-nao .
Mifandraisa amin'ny Apple Support
Ny olan'ny Apple ID dia tena sarotra tokoa ary ny mpiasa Apple ihany no mahavaha azy. Mandehana mankany Pejy fanampiana an'i Apple ary tsindrio iPhone -> Apple ID & iCloud , izay hanananao safidy hametraka antso miaraka amin'ny mpiasa Apple. Azonao atao ihany koa ny manangana fotoana amin'ny Apple Store eo an-toerana anao ary zahao ny Genius na ny teknolojia!
Atsaharo ny fangatahana ny ID Apple ahy!
Ny olan'ny Apple ID dia sarotra, mahasosotra, ary indraindray mampisavoritaka, koa antenaiko fa nanampy anao hamaha ilay olana amin'ny iPhone ny lahatsoratra. Raha nahavita izany dia zarao amin'ny media sosialy mba hahalalan'ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpanaraka anao ny zavatra tokony hatao rehefa mangataka ny teny miafin'ny Apple ID ny iPhone. Aza misalasala manontany ahy fanontaniana hafa eto ambany ao amin'ny fizarana hevitra!